के हामी ‘भेडा’ नै हौं त ?
नेपाली समाजमा ‘भेडा’ भन्नाले जनावर भेडाको मात्र अर्थ दिँदैन । यसलाई विम्वका रुपमा विभिन्न सन्दर्भमा प्रयोग गरिन्छ । मैले कतै सुनेको थिएँ, तत्कालीन नेता गणेशमान सिंहले राजधानीका जनतालाई भेडा भनेका थिए रे ! उनले कुन सन्दर्भमा किन भनेका थिए भन्नेतिर चर्चा गर्ने यो लेखको उद्देश्य होइन ।
पछिल्ला दिनमा पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको रहस्यमय आत्महत्यापश्चात उनको डाइङ क्लियरिफिकेशनमा उल्लेख गरिए अनुरुप टिभी प्रस्तोता रवि लामिछाने लगायत तीनजना अनुसन्धानमा तानिएका छन् । र, घटनाउपर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
घटनालाई लिएर शंकास्पद व्यक्तिहरु उपर छानबिन भैरहेका बखत लामिछानेको समर्थनमा चितवन लगायत देशका विभिन्न स्थानमा नाराजुलुस नै भइरहेका छन् । रवि लामिछानेको जयजयकार गर्दै मानिसहरु सडकमा उत्रिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल समेत विगत दुईहप्ता यता यही विषयले तातेको छ । रवि निर्दोष हुन् भन्ने एउटा पक्ष र रविउपर निश्पक्ष छानबिन गरेर मृतक पुडासैनीलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने पक्षबीच चलेको जुहारीले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक ध्रुविकरण भइरहेको छ । सम्मानित अदालतसम्म पुगिसकेको यो विषयमा पनि पक्षधरता लिएर टिप्पणी गर्ने यो पंक्तिकारको मनशाय होइन ।
यो लेख मूलतः हामीले धेरै प्रयोग गर्ने भेडा भन्ने विम्वमा केन्द्रित छ । के हामी नेपाली भेडा नै हौं त ? भेडा भन्ने विम्वले मैले बुझेसम्म एकोहोरो प्रवृत्तिलाई जनाउँछ । दोस्रो पक्ष, दोस्रो तर्क वा विकल्पमा कुनै सोचविचार नै नगरी एकोहोरोपना देखाउने प्रवृत्तिलाई नै हामीले भेडा भन्ने गर्छौं । सायद गणेशमानले परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न नसक्ने, विकल्पलाई स्वीकार गर्न नसक्ने एकोहोरा शैलीका जनतालाई भेडा भनेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो अनुमान छ । भेडाको बथानमा हामीले हेर्यौं भने अगाडिको भेडा जुन दिशामा हिंड्छ बाँकी भेडापनि त्यतै लाग्छन् । अगाडिको भेडा भीरमा खस्यो भने बाँकी सबै भेडा भीरमै खस्ने निश्चित हुन्छ । त्यसप्रकारका केही भिडियो सामाजिक सञ्जालतिर देख्नपनि सकिन्छ ।
नेपालको राजनीतिक, सामाजिक वृत्तमा भेडा भन्ने विम्व अत्याधिक प्रयोग हुने गरेको छ । अझै निर्वाचनका बेला यो शब्द थप प्रयोगमा आउँछ । कुनै नेता वा पार्टीलाई हजुरबुबाले भोट दिए, बाबुले भोट दिए, मैलेपनि दिनुपर्छ भन्ने तवरमा पुस्तैनी राजनीतिक आवद्धता एउटा भेडा प्रवृत्ति हो । कुनै दल वा नेताको गुण वा दोष नहेरिकन बाउले के गरे, हजुरबाउले के गरे, मैले पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने अजीवको मनोसामाजिक चिन्तन हामीमा व्याप्त छ ।
भेडा प्रवृत्ति भनेको स्वतन्त्र चिन्तनको अभाव पनि हो । स्वतन्त्र रुपमा विषयहरुलाई नहेरेर कुनै खास पक्षको एकोहोरो बाजा बजाउने प्रवृत्ति हाम्रो समाजमा व्याप्त छ । यसमा हाम्रो धार्मिक, सांस्कृतिक सभ्यतासँगै हुर्किएका सामाजिक मनोदशाहरु पनि कारण छन् । जस्तोकी हामी रजस्वला भएकी महिलालाई छुन हुँदैन भन्छौं, द्वापरयुगमा कृष्णले महाभारतमा देखाएको धुर्ततालाई देवत्वकरण गर्छौं । त्रेतायुगमा रामले सीतामाथि गरेको शंकालाई पुरुषार्थ सोच्छौं (कुनै धार्मिक आस्थामाथि प्रहार गर्ने उद्देश्य होइन) यी सबै हाम्रा धार्मिक, सांस्कृतिक भेडापन हो ।
हामी स्वतन्त्र छैनौं । कवि भूपि शेरचनले भनेजस्तै हामी आफै मिल्न सक्दैनौं, कसैले मिलाइदिनुपर्छ । आफै छुट्टिन सक्दैनौं कसैले छुट्टाइदिनुपर्छ । के हामी क्यारमबोर्डका गोटीजस्तै हामी स्वतन्त्र चिन्तनको अभावमा कसैको दास भएर बाँचिरहने हो ? हामीलाई अरुले नै चलाउनुपर्ने हो । एउटा टिभी अन्तर्वाताका क्रममा पंक्तिकारले नेकपा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई सोधिएको एउटा प्रश्नमा उनले बडो व्यंग्यात्मक ढंगबाट जवाफ दिइन्, हामीले पार्टीका बारेमा सोच्नै पर्दैन त्यो सोच्ने जिम्मा पनि अध्यक्षद्वयले नै लिनुभएको छ । हामीलाई आनन्द छ । के नेता झाँंक्रीले भनेजस्तै हामीले सोच्न छाडेको हो ? हामीमा स्वतन्त्र रुपमा चिन्तन गर्नसक्ने क्षमता नभएको वा क्षिण बन्दै गएको हो ? नत्र हामीले किन विषयको गम्भीरताका बारेमा चिन्तन गर्दैनौं ? किन आवश्यक्तभन्दा अनावश्यक दौडधूप र टाउको दुखाईमा हामी लागेका छौं ?
फेरि लागौं, रवि लामिछानेकै विषयमा । उनको बारेमा मेरो कुनै पक्षधरता छैन । किनकि उनी आफैपनि प्रणालीलाई सशक्त बनाउने अभियान अन्तर्गत जोशिलो पत्रकारिता गरिरहेका छन् । आफू मुछिएको घटनामा पनि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई सघाउने प्रतिवद्धता उनले यसअघि नै जनाइसकेका छन् । त्यसअनुरुप प्रहरीले अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ । तर, सडक र सामाजिक सञ्जालमा रवि कुनै हालतमा दोषी हुनै नसक्ने आशयमा किन यत्तिको होहल्ला भइरहेको छ ? यस्तो के अन्याय भयो रवि लामिछानेलाई कि उनका समर्थकहरु यो तातो घाममा प्राथमिकताका काम नगरी सडकमा उत्रिएका छन् ? के अब हजारौं मान्छे सडकमा आए भनेर शंकास्पद आत्महत्या प्रकरणमा अनुसन्धान नै नगर्ने ? वा हजारौं मान्छे समर्थक रहेछन् भनेर छाडिदिने ? वा अघिल्लो सालबाटमात्र कार्यान्वयनमा आएको शैशवकालीन मुलुकी ऐनलाई खारेज गरिदिने ? हो यही हो भेडा प्रवृत्ति भनेको ।
आफूलाई मन परेको सबै राम्रो, आफूलाई मन नपर्ने मान्छेको सास पनि गन्हाउँछ भनेजसरी किन हामी एकपक्षीय ढंगबाट लागिरहेका छौं ? के हामीसँग स्वतन्त्र चिन्तन गर्नसक्ने क्षमता विकास भएको छैन ? कि, राजनीतिक सामाजिक अवस्थाले हामीमा त्यो स्वतन्त्रता प्रदान गर्नसकेन ? हामीले ग्रहण गर्न सकेनौं ? यो विषय रविसँगमात्र सम्बन्धित छैन । यो हाम्रो मनोसामाजिक विशेषता हो । यसबारेमा हामी सबैले गम्भीर हुन आवश्यक छ ?
के आज देशका सबै समस्या समाधान भएका हुन् ? हाम्रो देशको राजनीति सुध्रियो ? हाम्रा प्रशासन र अड्डाहरु सुध्रिए ? हाम्रा सरकारी कर्मचारीहरुले घुस खान छाडे ? के हाम्रा पार्टीले चुनावको टिकट र सांसद पद बेच्न छाडे ? के हाम्रो सनातनी समाजले कथित दलितहरुलाई विभेद गर्न छाड्यो ? के हाम्रा दाजुभाइ मंगेतर र परिवारको खुशी किन्न खाडी जानुपर्ने बाध्यता हट्यो ? के हाम्रा दाइभाइहरु मुग्लानमा सास छाडेर बाकसमा बन्द भएर आउन छाडे ? के हाम्रा चेलीहरुका जवानी बेचिन छाडे ? के हामीले खाने खाद्यान्न र तरकारी विषादीरहित भए ? के हाम्रा सामुदायिक स्कूलका मास्टरले छोराछोरी निजीमा पढाएर स्कूलमा राजनीति गर्न छाडे ? के हाम्रा पुलिसले अपराधी लुकाउन छाडे ? के निर्मलाहरु बलात्कृत हुन छाडे ? के कर्णालीका चेलीहरु १४ वर्षमै आमा हुने र ३० वर्ष नपुग्दै बूढी हुन छाडे ? के हाम्रा अदालतका न्यायाधीशहरु बिक्न छाडे ? अँह मलाई लाग्दैन माथिका कुनैपनि समस्या समाधान भए । अनि, हामीले ठूला कुरा गर्ने ? सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस राखेर समाजको मसिहा हुनखोज्ने ? मुलुकको यो अवस्था आउनुमा हामी सबै जिम्मेवार छैनौं ? हामीमा व्याप्त भेडा प्रवृत्तिको उपज होइन यो सब ?
हो, म मान्दछु रवि लामिछानेको कार्यक्रम देशमा व्याप्त विकृतिविसंगति विरुद्ध थियो । विधिको शासन, दण्डहिनताको अन्त्य र समुन्नत एवं सभ्य समाज निर्माणको एउटा अभियान थियो । त्यसो भए के रवि लामिछाने एक्लै देश बनाउन काफी छन् ? ल मानौं काफी छन्, त्यसो भए के रवि लामिछानेले देश बनाउने हो ? होइन, रवि लामिछानेले देश बनाउने होइन । अझै स्पष्ट भन्दा पत्रकारले देश बनाउने होइन । पत्रकारले खाली लुकाइएका वा लुकेका चीजहरुलाई उजागर गर्ने हो । घटनालाई जनसमक्ष पुर्याएर बाँकी विश्लेषण गर्ने जिम्मा आफ्ना अडियन्सलाई दिने हो ।
राज्यका अंगहरुलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने हो । तर, म फेरि भन्छु पत्रकारले देश बनाउने होइन, पत्रकारले छिनोफानो गर्ने होइन । र जनताले पनि पत्रकारले देशै कायापलट गर्ने झैं भ्रम पाल्नु भनेको अर्को भेडा प्रवृत्ति हो ।
देश बनाउने राजनीतिले हो । जनताबाट अनुमोदित विधायकले निर्माण गर्ने नीति र कानून तथा त्यसको कार्यान्वयनका आधारमा देश बन्ने हो । उनीहरुले देखाउने इमान्दारिता र लगावले देशको भविष्य निर्धारण गर्ने हो । तर, हामी भेडाहरुले त्यो बिर्सिएका छौं, हामीलाई लागिरहेछ देश रवि लामिछानेले बनाउने हो । देश मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंशले बनाउने हो वा कुलमान घिसिंगहरुले बनाउने हो ।
आज रवि लामिछानेको समर्थनमा उठेको आवाज देशमा व्याप्त संस्थागत भ्रष्टाचारका विरुद्धमा उठ्नका लागि एकाकार हुनसक्छ ? हामीले नै बेजोड ताली र मतका साथ अनुमोदित गरेका भ्रष्ट नेताहरुका विरुद्ध हामी आन्दोलन छेड्न सक्छौं ? चप्पल लगाएर शहर छिरेर केहीवर्षमै सम्भ्रान्त बनेका कथित नेताहरुलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नसक्छौं ? शहर र विदेशतिर हानिएर हामीले बाँझो बनाएका आफ्ना गाउँघरका खेतबारीमा सुन फलाउने अभियान थाल्न सक्छौं ?
पुगनपुग २० हजार तलबको जागिर खाएको १० वर्ष नपुग्दै करौडौंको बंगला बनाउने कर्मचारीहरुलाई त्यतिधेरै सम्पति कहाँबाट ल्यायौ भनेर प्रश्न सोध्न सक्छौं ? जसले सक्छ त्यसले खान्छ भनेर जहाँ सकिन्छ त्यहाँ लामोहात गरिहाल्ने स्वप्रवृत्तिविरुद्ध आत्मसमिक्षा गर्नसक्छौं ? अहँ हामी सक्दैनौं । किनकि हामी क्यारमबोर्डका गोटी हौं हामी आफै चल्न सक्दैनौं अरुले चलाइदिनुपर्छ । किनकि हामी भेडा हौं हामीसँग स्वतन्त्र चिन्तन गर्नसक्ने क्षमता छैन । किनकि हामीलाई दास हुनै आनन्द छ । हामी दासी थियौं, छौं र रहनेछौं ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ ५, २०७६, ०९:१०:००